Tototry ny fandrindrana mandeha ho azy macOS Sierra ve ianao? | Avy amin'ny mac aho
Tototry ny fandrindrana mandeha ho azy macOS Sierra ve ianao?
Misy mpiara-miasa maromaro izay nanontany ahy ny zavatra tokony hatao mba tsy ho tototry ny fampifanarahana mandeha ho azy ny macOS Sierra ary ny zavatra apetrakao amin'ny Desktop sy ao amin'ny folder Documents dia halefa any amin'ny cloud iCloud, raha mbola manana toerana ianao, ary omeo lanja lehibe indrindra ny teboka eu raha esorinao ny asany, ny fisie izay manjaka dia an'ny an'ny rahona fa tsy an'ny an'ny solosainao.
Ny zavatra voalohany nolazaiko tamin'ireto mpiara-miasa ireto dia raha tsy tian'izy ireo ny fomba fiasan'ity fampifanarahana ity dia tokony hesorin'izy ireo izany ary izany dia miasa amin'ny toerana iCloud Drive ao amin'ny sisin'ny vavahadin'ny Finder.
Afaka namonjy ny antontan-taratasinay tao anaty rahona iCloud nandritra ny volana maro izahay izao ary rehefa nampandeha ny serivisy iCloud Drive izahay, dia nipoitra ho azy teo amin'ny sisin'ny Finder ny sokajy sy izay rehetra ho hitantsika. voatahiry ao anaty rahona izy io ary azontsika ampitaina amin'ny fitaovana na solosaina rehetra.
Na izany aza, Apple dia naniry ny hanafenana azy bebe kokoa amin'ilay mpampiasa ny fizotrany, izany hoe, tsy fantatr'izy ireo fa misy ny fampifanarahana. Noho izany dia nanapa-kevitra fa amin'ny macOS Sierra ny mpampiasa dia afaka manapa-kevitra raha toa ka ampifanarahana ny toerana Desktop sy Documents mandeha ho azy sy ao aoriana miaraka amin'ny iCloud.
Efa nolazaiko fa apetraky ny rafitra macOS Sierra ity fanontaniana ity satria ianao no nanokatra azy io voalohany rehefa nametraka azy ary raha tsy dia azo antoka na tsy azo antoka ianao aza ampidirina ny safidy raha tsy mamaky kely momba ny tena fiasan'izy io.
Eny, ireto mpiara-miasa ireto dia efa nanetsika ny fampifanarahana vaovao amin'ny Macs ary nilaza tamiko izy ireo fa tsy te hijanona amin'ny fampiasana azy ireo ary mahita fa tena azo atao izany fa ny rafitra ihany no manao ny asa maloto amin'ny fakana ireo rakitra rehetra. ary mamonjy azy ireo ao anaty rahona. Na izany aza, Tsy dia afa-po loatra amin'ireo rakitra rehetra mampakatra ny rahona izy ireo ary nangataka fanampiana tamiko izy ireo hahafantarako hoe aiza no hahitana folder ahafahako mitahiry eo an-toerana.
Ho an'ny mpampiasa salantsalany dia tsy olana izany fa ny ahafahantsika mivezivezy amin'ny Finder Prefers dia mampiseho amintsika ny kapila mafy ary ao anatin'ny mpampiasa anay dia mamorona ny fampirimana ho an'ny fitehirizana eo an-toerana izahay. Nefa satria tsy dia manana traikefa loatra ny mpampiasa rehetra, dia lazainay aminao ny fomba hanaovana izany:
Voalohany Tsy maintsy sokafana ny Finder sy ao amin'ny menio ambony Finder tsindrio eo safidinao.
2º Ao amin'ny varavarankely misokatra dia tsy maintsy tsindrio ny kiheba sidebar ary ireo zavatra miseho dia ampiasainay ny kapila mafy ary arak'izany no hisehoan'ny kapila mafy ao amin'ilay sidebar voalaza.
3º Ankehitriny dia tsindrio ny kapila mafy ary misy varavarankely Finder manokatra izay ahitantsika toerana fampirimana hiantsoantsika FILES eo an-toerana ary hampiasainay hampiantrano ny rakitra rehetra tadiavinay ao amin'ny solosaina fa tsy amin'ny rahona.
Mazava fa ity nambaranay hevitra taminao ity dia «patch» tsy tokony hataonay, fa io no fomba ahafahantsika mampifangaro ny rahona amin'ny TANY. Raha tsy tianao toy izao, dia tsara kokoa ny manafoana ny fampifanarahana Desktop sy Documents ary miasa amin'ny toerana iCloud Drive ao amin'ny Finder ihany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » macOS Sierra » Tototry ny fandrindrana mandeha ho azy macOS Sierra ve ianao?
stb339 dia hoy izy:
Ary tsy mora ve ny manokatra ny fampirimana tadiavinao ao amin'ny solonanaranao? Tsy mirindra ireo!
Valiny amin'ny stb339
Google dia maniry fa tsy afaka, ireto ny tadiny MODE
Magic Trackpad an'ny Apple eo ambanin'ny 70 euro fotsiny